Mumwe wenyanzvi idzi, VaPersistance Gwanyanya, avo vanoshanda ne Percycon Global Fund Managers, vanoti zvakataurwa pamusoro pemakambani ehurumende, kana kuti ma ‘parastatals’ zvekuti anofanira kunyatsoongororwa, zvinhu zvine musoro sezvo makambani aya asiri kushanda nemazvo, izvo zvinokonzera kuti hupfumi hwenyika husamire zvakanaka.
VaGwanyanya vanotiwo hurumende inofanira kudzikisa mari yainokwereta uye yainoshandisa pazvinhu zvakaita sekubhadhara vashandi uye inofanira kubvisa mitemo iri kuvhiringidza avo vanoda kuisa mari yavo mumabhizimisi muZimbabwe.
“Kune vanhuwo vakawanda wanda varikupiwa mabasa nehurumende; hurumende inofanira kuita zvinhu zvinemusoro kuti mari yainoshandisa idzike. Zvinhu zvakakoshera nyika izvozvo,” VaGwanyanya vaudza Studio7.
VaGwanyanya vatiwo hurumende inofanira kukurumidza kugadzirisa dambudziko remari iyo isiri kuwanikawa munyika.